Ego njem njem 2021 na-erughi ọkara nke ọkwa ọrịa na-efe efe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ego njem njem 2021 na-erughi ọkara nke ọkwa ọrịa na-efe efe
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Ịtụ egwu • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • Rail njem • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ego njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na-atụ anya iru naanị ijeri $ 385 na 2021, erughị ọkara pre-COVID-19.
Ọrịa COVID-19 kpalitere oke nkwekọrịta ahịa n'akụkọ ihe mere eme.
Iwu mkpọchi iji gbochie mgbasa nke nje, dugara n'ọtụtụ puku ezumike ezumike, na ụlọ oriri emechiri emechi.
Mkpokọta mfu ego a na -atụ anya njem njem na ahịa njem nlegharị anya ga -ahụ n'afọ a bụ nnukwu.
Mba dị iche iche gburugburu ụwa amalitela ịkwadebe maka oge ọkọchị 2021 n'isi mbido afọ iji tụgharịa njem na mpaghara ha ma mee ka ndị njem nleta leta n'enweghị nsogbu.
Mkpọchi mkpọchi n'ọnwa mbụ nke 2021, ịbawanye ikike nnwale, yana mmachibido iwu zuru oke maka ndị mbata na-adịghị mkpa, ọkachasị site na mba ndị nwere mmụba nje, bụcha akụkụ nke mbọ ndị a. Agbanyeghị, ọ ka ezughi ịkwụsị ntopute na -arịwanye elu nke ọrịa na -efe efe na -emetụta ndị njem na mpaghara ndị ọzọ nwere njikọ chiri anya.
Dabere na data ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ, ego njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na-atụ anya iru naanị ijeri $ 385 na 2021, erughị ọkara pre-COVID-19 ọkwa.
Ụlọ ọrụ irugharị ụgbọ mmiri na ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ kacha njọ, ego ha jikọtara ọnụ ruru $ 258 ijeri
COVID-19 kpalitere nnukwu nkwekọrịta ahịa n'akụkọ ihe mere eme, ebe mba dị iche iche gburugburu ụwa tiri iwu mkpọchi iji gbochie mgbasa nke nje, na-eduga ọtụtụ puku ezumike akagbuo, na ụlọ oriri emechiri emechi. Agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ha wepụrụ mmachi njem ma mepee ọzọ maka oge ọkọchị nke 2021, mfu mfu ego a na -atụ anya na ahịa a ga -ahụ n'afọ a ka nwere nnukwu.
N’afọ 2020, ego mpaghara niile gbadara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% YoY ruo ijeri $ 298.5, kpughere data ọhụrụ. Agbanyeghị na atụ anya na ọnụọgụ a ga -eto ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30% ruo ijeri $ 385.8 na 2021, nke ahụ ka bụ ijeri $ 351 na -erughi tupu ọrịa ọjọọ ahụ amalite.
The ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ka bụ mpaghara kacha nwee nsogbu na njem njem na ahịa njem. N'afọ 2021, a na -atụnye ụtụ njem ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ ka ọ rute naanị ijeri $ 6.6, ma ọ bụ 76% erughị na 2019. Ụlọ ọrụ ụlọ oriri na nkwari akụ na -esochi ijeri $ 132.3 ijeri na 64% gbada n'ime afọ abụọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ nde ndị njem nleta kpebiri ịga ezumike na oge 2021, ọnụ ọgụgụ na-egosi na mkpokọta ego nke ngalaba abụọ ahụ ga-adịgide $ 258 ijeri n'okpuru ọkwa ọrịa na-efe efe.